Ngokwengxelo yamva nje evela kwi-LEDinside, icandelo lokophando lwentengiso iTrendForce, i-2018 yeDijithali yeDigital Display kunye neMicrosoft LED Display Market Outlook, ngenxa yokudodobala kwezoqoqosho, imakethi ye-LEDdisplay yehlabathi inamava okukhula okulinganiselweyo kunye neemfuno zentengiso zemiboniso yesiko yehlile. Nangona kunjalo, enkosi kuphuhliso lwe-LED entle yokubonisa inowuthi kule minyaka idlulileyo, imfuno yokubonisa yemakethi inyukile kwakhona. Ngo-2017, isilinganiselo semarike yokubonisa i-LED safikelela kwi-USD 5.092 yezigidigidi. Umboniso we-pitch olungileyo ngaphakathi (≤P2.5) uya kuqhubeka nokugcina ukukhula emva kokufumana ukukhula ngokukhawuleza kule minyaka imbalwa idlulileyo, kwaye isikali sentengiso ngo-2017 yayiyi-USD 1.141 yezigidigidi nge-CAGR ka-2017-2021 kulindeleke ukuba ifike kwi-12%.
Bonisa ukuThengiswa kweNtengiso
Ngo-2017, isilinganiselo semarike yokubonisa i-LED safikelela kwi-USD 5.092 yezigidigidi. Umboniso we-pitch entle wasendlwini (≤P2.5) uya kuqhubeka nokugcina ukukhula emva kokufumana ukukhula ngokukhawuleza kule minyaka imbalwa idlulileyo, kwaye isikali sentengiso ngo-2017 yayiyi-USD 1.141 yezigidigidi nge-CAGR ka-2017-2021 kulindeleke ukuba ifike kwi-12%.
Ngokukhanya kwesicelo sokubonisa i-pitch entle, inokuhlulahlulwa ngokwamacandelo amane njengoko kubonisiwe ngezantsi. Ukusasaza isicelo (kwiholo); Igumbi lokhuseleko nolawulo (igumbi lokujonga kunye nolawulo); Isicelo somboniso wentengiso (kubandakanya umboniso wentengiso, umboniso, igumbi lendibano yenkampani, igumbi lokuhlangana ehotele kunye neqonga, njl. Isicelo sikawonke-wonke kunye nentengiso (ikakhulu kubandakanya umboniso wangaphandle, isikhululo seenqwelomoya, inkqubo yemetro kunye nentengiso). Umboniso wezorhwebo, iindawo zikawonke-wonke kunye neevenkile zinamandla amakhulu okukhula kwixesha elizayo. Umboniso we-LED uya kuthabatha indawo ye-DLP kunye neLCD.
Ngo-2016, isikali sentengiso se-LED kwihlabathi liphela sasiyi-USD 5.001 yezigidigidi kwaye abavelisi abaphezulu abasibhozo bathathe iipesenti ezingama-38 zesabelo sentengiso sehlabathi. Phakathi kwabo, isikali sentengiso se-LED sehlabathi sibonise isikali sentengiso sifikelele kwi-USD 854 yezigidi ngo-2016. Ngenxa yengeniso yabavelisi, abavelisi abaphambili abasi-7 bavela eChina, kwaye iDaktronics ithatha indawo yesibhozo. Ngempembelelo enkulu ekhokelayo, abavelisi abaphezulu abayi-8 bathatha ngokupheleleyo iipesenti ezingama-78 zesabelo sentengiso sehlabathi, i-LEDinside iqikelela ukuba intengiso ye-LED yomhlaba wonke iya kuqhubeka nokukhula ngokukhawuleza ngo-2017.
Umkhwa weNtengiso ye-LED
Ukuboniswa kwexabiso lentengiso ye-LED ngo-2017 kulindeleke ukuba ifike kwi-USD 1.63 yezigidigidi, kwaye kulindeleke ukuba ibe yi-USD 1.94 yezigidigidi ngo-2021. Ukukhula komgangatho we-LED ukubonisa ukubambezeleka kuncipha, kodwa ukuboniswa kwe-pitch efanelekileyo kuseyona nto iphambili yokunyusa ibango le-LED .
Ngokutsho kwe-LEDinside, abavelisi abaphezulu be-digital abenzi be-LED ngeniso kwihlabathi liphela yi-MLS, NationStar, Everlight, Kinglight kunye neCREE. Ukongeza, abavelisi abahlanu abaphezulu bedijithali abenzi be-chip ngengeniso (ukuthengiswa kwangaphandle) kwihlabathi liphela ziSan'an Opto, Epistar, HC Semitek, Silan Azure, kunye neTshintsho lokuKhanya.
Umqhubi we-IC Market Trend
Iqhutywa ngumboniso we-LED ococekileyo, umboniso wentengiso ye-ICs ugcina ukukhula ngokukhawuleza. I-LEDinside iqikelele ukuba isibonisi somqhubi we-ICs silinganise i-USD 212 yezigidi ngo-2017. Ngophando lwe-LEDinside, abavelisi bokuqala abahlanu be-ICs yokuqhuba umboniso ngokulandelelana yiMacroblock, Chipone, Sumacro, Sunmoon, neMy-Semi, emele iipesenti ezingama-92 zentengiso iyonke. yabelana. Abanye abavelisi kubandakanya uMvelisi weMicrosoft Electronics kunye neTexas Instrument, njl.
Uphuhliso lwexa elizayo
Ukuphendula imeko yentengiso ekunciphiseni inowuthi, i-LED isiya kwiitekhnoloji ezintathu, kubandakanya ne-COB ye-pitch entle ye-LED, i-QD phosphor ifikelela kubuchule be-RGB, kunye nomboniso we-Micro LED. Ngapha koko, ithuba lokuboniswa kweMicrosoft ye-LED ibandakanya ukubonwa okubanzi, ukukhanya okuphezulu kunye nokuthelekisa, umgangatho ophezulu womfanekiso, kunye nomfanekiso ogqibeleleyo. Okwangoku, abadlali bemveli kunye nabadlali beLCD baceba ukungena kwimakethi yokubonisa ye-Micro LED ngentsebenziswano kunye nomanyano.